Olee otú Steve Smith nwụrụ? - Azịza Kacha Mma
Isi > Azịza Kacha Mma > Steve smith ọgba tum tum mberede - olee otú idozi
Steve smith ọgba tum tum mberede - olee otú idozi
Olee otú Steve Smith nwụrụ?
'Mmetụta iko ụwaSteve Smith nwụrụn'ehihie a mgbe ọ merụsịrị nnukwu mmerụ ụbụrụ nke sitere na mberede ọgba tum tum enduro na obodo ya nke Nanaimo, British Columbia.
Number 10 - bombu Selfie Enwere ụfọdụ ihe ị na - ekwesịghị ọgbaghara, otu ihe ndị a nwere ike ịbụ ihe mgbawa dị egwu. Menmụ nwoke abụọ na-eme njem na Russia mgbe ha tụgharịrị - bọmbụ dị ndụ; a tụrụ grenade ahụ na mberede na ọnọdụ a, nke pụtara na ogbunigwe ahụ nwere ngwa ọgụ ma nwee ike ịgbawa ngwa ngwa. Ihe mere na ọ bụghị gbawara ugbua bụ a usoro malfunction; N'agbanyeghị nke ahụ, ọ bụghị nchekwa iji bulie ya.
Mụ nwoke abụọ ahụ amaghị nke ahụ; Ha chere na ọ ga-abụ ihe magburu onwe ya iburu grenade ahụ were onwe gị. N’ezie, grenade ahụ gbawara n’etiti oge foto ahụ, mana ọ bụ eziokwu, n’agbanyeghi na ụmụ nwoke ahụ nwụrụ, ekwentị ahụ lanarịrị ma jiri ya mee ihe ngosi nke otu ụmụ nwoke si nwụọ. Ọtụtụ mmadụ na-eji egbe ha na ngwa ọgụ ndị ọzọ ebupute foto, ha na-eche na ọ bụ ihe dị jụụ, mana ọ nwere ike ịfu ndụ ha.
Nọmba nke 9 - Michael Godwin Ebu ụzọ gbuo ya, mana mgbe mgbanwe nke ikpe ya bịara wee maa ya ikpe ịga mkpọrọ nke ndụ, mgbanwe ọ happinessụ, ma ọ bụ opekata mpe ọ gaara adị. Ndụ n'ime ọnụ ụlọ mkpọrọ ya dị mma ruo otu ụbọchị ọ chọpụtara na telivishọn o nwere na ya anaghị arụ ọrụ. Ọ nyochara ma mesịa chọpụta na ọ bụ waya lousy; Mgbe ọ lechara ọnọdụ ahụ anya, ọ chere na nhọrọ kachasị mma bụ ịkpụ ezé ezé ya, na n'ọtụtụ ụzọ nke na-enweghị ọgụgụ isi.
Ma nhazigharị ọ rụrụ site na mposi dị nchara mere ka ike nke ọkụ eletrik nke gburu ya dịkwuo ike. Ọnụ Ọgụgụ nke 8 - Notzọ A Ga-esi Wepụ Azụ Anụ Azụ Na 2002 Chere. Aesụ nwere ike ịdị oke egwu ma nwee ike ịnwụ.
N'oge oge marathon ahụ ọ naghị eri ma ọ bụ hie ụra ma naanị nkwụsịtụ o nwere bụ ịga ụlọ mposi ị nwere ike ịhụ nsogbu na nke ahụ ị mara ebe nke a na-aga. Maka na ọ gwụchara awa iri ise ahụ n’achọghị ilebara ahụ ya anya, ọ nwụrụ. Ndị dọkịta kwuru na ọ bụ ngwakọta nke nkụda mmụọ na ike ọgwụgwụ kpatara ọnwụ ya na mberede.
Nọmba 5 - Lava Lamp Bomb Enwere ọtụtụ ụzọ dị iche iche iji chọọ ụlọ mma, mana oriọna na-adị n'etiti ndị mmadụ n'otu n'otu, mana mgbe ị natara ma kpoo ha ọkụ na mbụ, enwere iwu ụfọdụ ịchọrọ ịgbaso, ọkachasị nwayọ. Philip Quinn dị afọ 24 na-etinye oriọna lava n'otu ọkụ ọkụ ka ọ nwụrụ mgbe ọ gbawara, na-ezipụ otu nnukwu iko n'ime obi ya. Ndị nne na nna Philip Quinn hụrụ ozu ya na ụgbọala ya na-adọkpụ na Kent.
Quinn kwuru na ọ zọrọ n'ime ime ụlọ ya mgbe oriọna ahụ gbawara, ebe ọ nwụrụ. Nọmba 4 - You Nụrụ Ihe Echiche bụ na ihe si n’eluigwe daa wee laa gị n’iyi abụghị ihe ọhụrụ; N’amaghị na ọ bụ helikọpta na-ada gị, agbanyeghị, ị chọghị ka e gbuo gị. Ma, otu nwa akwụkwọ nọ n’ogbe ahụ nwụrụ na British Columbia mgbe helikọpta dara n’ala, gbuo ya.
Ebum n’uche Ajụjụ a chọrọ ka azaa ebe a bụ ihe kpatara na ọ hụghị ma ọ bụ nụ ihe ọ bụla. Azịza ya bụ na ọ nọghị n'ụzọ ziri ezi, yana o nwekwara nnukwu olu isi na ya. Ndị helikọpta ahụ nwụrụ anwụ, ihe niile merenụ jọgburu onwe ya.
Otu ndụmọdụ ndị ndụmọdụ, etinyela ekweisi gị na olu zuru oke mgbe ị na-eje ije. Onu ogugu 3 - Nchacha Dika o dibu, mpio anwụrụ ọkụ abụghịzị akụkụ nke ụlọ na nka nka. Nke a bụ n'ihi sistemụ kpo oku ọhụrụ, nke bụ ezigbo mmekpa ahụ mgbe ọ na - ehicha - Marko dị afọ laghachiri n'ụlọ nke aka ya wuo anwụrụ ọkụ.
Ngwa nhicha. Thelọ anwụrụ ọkụ dị oke elu maka otu broom dị mfe, mana nke ahụ ga-ezuru ya ma ọ bụrụ na ọ nwere ike kegide ahịhịa ya na yinye wee jiri ihe buru ya ibu. Ma gịnị ka ọ dị njikere iji dị ka ibu arọ? O nwere otu ihe dị mma ma kọmpat.
Nke kachasị mma bụ na ejiri ọla kọpa mee ya ka ọ nwee ike ịgbado ya na yinye ahụ. N'ụzọ ụfọdụ, ọ ghaghị ileghara anya na ọ bụkwa bọmbụ aka ya ma jupụta ya na ihe mgbawa. Marko gbanyere welder ya wee malite ịmepụta arc n'etiti grenade na yinye ahụ.
Grenade ahụ gbawara ka ọla ahụ na-ekpo ọkụ. Ike nke mgbawa ahụ gburu ogbenye Marko ozugbo. O cheghị echiche n’ezie gbasara atụmatụ ya.
Nọmba 2 - Bignweta Nnukwu Nnukwu ikuku bụ njem dị egwu ebe ndị mmadụ na-eji ụgbọ mmiri gafee mmiri ma na-enweta oke ikuku mgbe ụfọdụ. Tokwesịrị ị attentiona ntị na oke ebili mmiri. N'ụbọchị ikuku na-ekukarị, ọdụ ụgbọ mmiri ahụ gwara ndị na-ahụ maka mmiri ka ha nọrọ n'oké osimiri mana ọtụtụ, gụnyere Adrian Monnoyeur, jụrụ, ya mere ha gara sọfụfụ.
Mgbe ọ nọ na-egwu mmiri, a na-adọkpụ ya gafee oke osimiri na ọsọ nke ihe dịka 160 kilomita kwa elekere mgbe oke ebili mmiri buliri ya elu na ikuku na bọọdụ ya. Adrian gbawara na Saint-Jean-de-. Luz na ndịda ọdịda anyanwụ France.
O tiri ozu ọtụtụ ụlọ, gụnyere nnukwu ụlọ nkwari akụ; Mgbe o mechara kewaa n'agha ya, ọ dara site na elu 15 m. A gaara ezere ya ma a sị na o gere ndị ọchịchị ntị. Nọmba 1 - Nọrọ na Whengbọ Ala Mgbe ị na-aga njem safari, otu iwu kacha mkpa abụghị ịhapụ ụgbọ ala n'oge ọ bụla belụsọ ma a dụrụ gị ndụmọdụ ka ị mee nke ahụ; Nke a bụ maka nchekwa nke mmadụ na anụmanụ.
Ma ndị okenye German njem nleta abụọ na Spanish safari kpebiri na ha agaghị anụ ọtụtụ ịdọ aka na ntị a na-ekesa na ogige safari wee pụọ n'ụgbọ ahụ wee nwee anụ ọhịa karịa. Ka ha si n'ụgbọala ahụ pụta, otu agụ n’ahụ dakwasịrị ha wee gbuo ha. Ebe ọ bụ na ha anaghị erube isi n’iwu ahụ, ụgwọ ha kwụrụ bụ ndụ ha.
Nke a bụ nhọrọ anyị kachasị nzuzu nke ndị mmadụ nwụrụ. Gịnị ka unu niile na-eche banyere ya? Ka anyị mara na ihe. Ugbu a enwere m ajụjụ maka gị! Chọrọ ịmalite ọwa youtube dị jụụ dị ka Nwee Amamihe? Chọkwara ihe Nweta ego mgbe ndị mmadụ na - ele gị edemede? Anyị nwere ike inyere gị aka! Maka ozi ndị ọzọ, lee njikọ dị na nkọwa nke edemede a.
Nke a ewetara anyị na njedebe nke edemede a. Echefula ịpị bọtịnụ Dị ka, ịdenye aha ma gbanye mgbịrịgba ngosi ka ị ghara ịhapụ ihe ọ bụla n'ime akụkọ ọhụrụ anyị. Lee gị na ihe omume na-esote nke Amamihe!
Gịnị mere Steve Smith MTB?
Ugwu Mountain BikerSteve SmithNwụrụ na 26
26 afọ downhilligwe kwụ otu ebeagbụrụSteve Smithnwụrụ mgbe ọ nwụsịrị nnukwu nsogbu trauma na ọgba tum tum na Nanaimo, British Columbia.Ọnwa Ise 13, 2016
Aha m bụ Steve Smith, adị m 25 afọ. Esi m Vancouver Island, British Columbia, Canada. Gba ọsọ n'ụzọ bụ isi - mkpebi ọ bụla m mere dabere na ya, ọ bụ akụkụ kachasị mkpa nke ndụ m ka m wee kwuo okwu enweghị m ike icheta ihe ọ bụla ga-eme ka m banye na mpaghara ahụ dịka ọ na-agba n'ịgba ọsọ.
Ozugbo ọnụ ụzọ ámá dara ma ịmalite, ọ dị ka ọ dị mfe karị. Enweghị nhazi. Ihe niile na-eme n'ụzọ ahụ.
Kwesighi iche echiche banyere akụkụ ahụ, ị ​​gaghị eche echiche banyere braking, ị na-anwa ịga n'ihu. Nanị ụzọ ị ga-esi na-eme egwuregwu bụ ịgba ọsọ na usoro oge. Amaara m nke ọma ihe m na-eme kwa ụbọchị, kedu oge m ga-eme.
Igosi ebe a bụ atụmatụ dị egwu. Agwara m na m ga-agbada ugwu mgbawa. Amaghị m ihe m ga-atụ anya ya.
Amaghị m kpọmkwem ebe anyị nọ. Anyị na-ewere obere mbara ala a, agwaetiti nke bụ naanị nnukwu ugwu mgbawa. O buru oke ibu dika ugbo elu m na-efepu n’agwaetiti a n’ụlọ.
Mara mma jụụ. Ozugbo n'àgwàetiti ahụ, a na-enwe ọtụtụ obi ụtọ; Anwụ na-acha. Anyị gafere agwaetiti ole na ole.
Ebe runway dị - ọ dị na mmiri. Ga-ahụ ugwu mgbawa ugwu niile dị ka lava na mmiri ma ị nwere ike ịhụ ugwu mgbawa si n'akụkụ ikuku ụgbọ elu Air Stripso dị jụụ. Anọ m n’ọdụ ụgbọ elu ahụ mgbe anyị si n’ụgbọelu ahụ rituo.
A nzuzu mgbawa ugwu agwa, ọ bụ nzuzu! Gbọ elu ahụ dị ezigbo mma. Ọ dị ka naanị oke osimiri na ugwu mgbawa, otu ọ dị, ọ na-aga ogologo. Ebe a adịghị ka nnukwu agwaetiti nwere ugwu mgbawa na ya.
Ọ bụ ihu ọma naanị ugwu mgbawa nwere okporo ụzọ gburugburu ugwu mgbawa. Ọ weghaara agwaetiti ahụ dum. Echeghị m na Japan ga-adị ka nke a? ndia.
Nke a juputara dị ka m kwuru, ọ dị ka Hawaii ebe a. E nwere nkwụ ndị dị n'akụkụ oké osimiri ahụ. Obodo a dị ka ebe na-ekpo ọkụ.
Amaghị m otú ebe a si buru ibu. Otú o si ada ụda, ọ dịghị onye nwere ike ịga ebe ahụ. Naanị ndị na-abịaru ndagwurugwu ahụ bụ ndị na-arụrụ gọọmentị ọrụ na ndị na-eme ya? gbaa mbọ hụ na ihe niile dị mma na ihe niile, otu ugboro n’ọnwa, yabụ anyị kwesiri ibu ndị izizi anyịnya igwe, ọ bụ ihe nzuzu.
Nke a bụ n'ezie ahụmịhe mbụ m nwetara ugwu mgbawa. (Japanese na-ekwu okwu) Akụkụ kachasị mma nke agwaetiti Miyake bụ ebe anyị nwere ọtụtụ nnụnnụ ọhịa ma ugbu a anyị nwere oke ugwu mgbawa nwere ike iji dọta ndị njem. Achọrọ m ịgwa ndị Japan na ndị mba ọzọ banyere mma nke agwaetiti a.
Hụ ugwu mgbawa na nanị ijegharị ọ bụ naanị na-ada ụda.
Ọ bụ naanị nzuzu, ọ buru ibu. Ọ dị ka Mordor ma ọ bụ ihe ọ bụla- Osisi niile anwụọla. Ihe a na-ele anya na-eme ihe dị ka otu kilomita site n'elu.
Ahụtụbeghị m ebe dị otu a. Na ndagwurugwu ahụ anyị hụrụ na ọ nọghị ebe ahụ mgbe ọ gbawara na 2000, ya mere unyi niile d si na ugwu ahụ, ash na-ere ọkụ. Ọ dịka ngwakọta nke ụwa na lava na ntụ ntụ m chere.
Ọ dị nzuzu dị ka ọ dị mfe igwu wee weghara ya ozugbo ka ọ dị n'ụzọ doro anya nke ọma, mana n'otu oge ahụ m na-ebugharị ya, ọ na-atọkwu ya ụtọ, ee ee ọ dị mma. Ọ na-amị amị, mana enwere m ike ịgụ ya n'ụzọ ụfọdụ, ya mere ọ dị ezigbo mma. Enwere ebe ị ga-ehi ụra n'azụ uwe m, dị ka naanị - ọ bụghị apịtị ma ọlị, naanị ọ na-eme nke ọma.
Ọ ga-amị amị n'eziokwu, mana m ga-achọ ịbanye n'ime ya wee jide ya, yabụ ọ mara mma ịtụkwasị obi ma na-atọ ụtọ ịmịgharị na ya. Ahụ ruru m ala ịmị na unyi a. Ee, naanị m nwere ụda dị ka ịkpafu na ịgbagharị na igwe kwụ otu ebe ma na-aga n'akụkụ nkuku n'ezie, dị ezigbo mma.
Ọ bụ mmetụta kachasị mma enwere. Unyi ahụ dị nnọọ iche na ihe ọ bụla m chụburu. Enwere m ọtụtụ ọchị.
Anọ m na Snapchat na Tokyo ugbu a. (Ọchị) N'ihu agwaetiti mgbawa na checki Chọpụta ebe a na Tokyo. Agabeghị m obodo dị ka nke a.
Ọbụnadị nso. Imirikiti ebe anyị na-agba ọsọ bụ ụfọdụ ụdị egwuregwu ski na ọtụtụ oge n'etiti etiti. Tokyo dị nnọọ iche, ọ na-arụsi ọrụ ike na ọtụtụ mmadụ na ọ na-enwe ọganihu na ọdịnihu. (Egwú) ♪ Ee, na mpaghara Shibuya ọ dị gị ka ọ bụ ndanda na mkpọ.
Enwere nnọọ ọtụtụ mmadụ, enwere ọtụtụ okporo ụzọ na ọtụtụ ihe na-aga. Ìhè na-enwu gbaa ma ị pụta n'oké ọhịa wee banye ebe ahụ ọ na-atọ gị ụtọ ilegharị anya wee chee, 'Gịnị na-eme ebe a?' Japan bụ ebe m na-achọ ịga ma amaghị m ihe m ga-eme. Ọ dị nnọọ ka nke ahụ.
Kwọ ụgbọala na Tokyo bụ ihe nzuzu. Ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ozugbo na ọ ghọrọ oke ọhịa. O sizi n’obodo ahụ gbagoo n’ugwu ndị a.
Otu n'ime ebe ọpụpụ m na-anya ụgbọala dị ka nkeji nke 7 nke buru ibu. Ọ bụ otu n’ime ugwu ndị ka buo m ibu. (Egwu siri ike) ♪ ịgba ịnyịnya ebe a dị iche na nke mbụ.
Lee teknụzụ dị n'ụzọ dị iche kpamkpam, ọsọ ị na-anya dị oke ọsọ ma ọ dị ka ị na-aga 70 km / h oge niile, ee ee, ọpụrụiche. Ebee ka m ga-ahụ onwe m n'ime afọ ise? M na-ahụ onwe m na-eme kpọmkwem ihe m na-eme ugbu a, Abụ m 25 ugbu a ma ọ bụghị nwata na egwuregwu ma ọ bụghị agadi n'egwuregwu ka m nwee ọtụtụ afọ ịgba ọsọ na m ga-achọ ịnọ na-agbanye ihe m bụ na-eme. Gba ịnyịnya ígwè enyela m ohere nzuzu, maa ezigbo ekele maka nke ahụ ♪ (egwu siri ike) ♪
Kedu afọ Steve Smith nwụrụ?
Ọnwa Ise 10, 2016
Naanị ọnwa ole na ole ka onye nwe ụlọ Alex Trebek nwụsịrị - ihu nke ngosi - Ize! nwụnahụrụ otu n'ime ụmụ okorobịa na-eto eto mgbe Brayden Smith nwụrụ na February 5, 2021. Nwa amaala Nevada meriri egwuregwu ise n'usoro, merie $ 115,000 na mmeri n'oge ọhụụ ya, ma na-akwado ịlaghachi na ngosi ahụ maka asọmpi na-abịanụ. nke ndị agbachitere. Dabere na New York Post, nne Smith zipụrụ otu tweet na February 12, 2021 na-akwado ọnwụ nwa ya ma na-eme mpụta ọdịdị ya na ngosipụta ịgba ajụjụ ogologo oge.
O dere, sị: 'Anyị nwere ekele na Brayden nwere ike ibi ndụ Nrọ ya n'ihe ize ndụ.' Nwa nke 24 gbara ọsọ na Jeopardy! dabara na ụbọchị ikpeazụ nke Trebek dị ka onye ọbịa. Lastbọchị ikpeazụ nke Trebek na studio ahụ bụ Ọktoba 29, 2020, ọ nwụrụ n'ọrịa kansa pancreatic nanị ụbọchị 10 ka e mesịrị.
Otu n'ime ihe ncheta kasị enye obi ụtọ Smith nwere bụ isoro otu onye ama ama na-ahụ maka ihe nkiri onyonyo bụ Sarah Whitcomb Foss na-ekerịta ihe nkiri. ”Onye na-eto eto asọmpi nwere mmetụta na ụbọchị ikpeazụ nke Trebek na ihe ngosi ahụ. Gwa ndi mmadu izu uka na Disemba 2020, Ize! Onye na-emepụta ihe Mike Richards kwuru, sị, 'Trebek nwere mmasị na Brayden n'ihi na ọ bụ nwata na ụdị nke na-adọrọ mmasị ma na-atọ ọchị n'ụzọ nke ya.' Ma gịnị mere ka obere kpakpando ghara ịnwụ? , Brayden Smith nọrọ n'ụlọọgwụ ụbọchị ole na ole tupu ọ nwụọ na February 5, 2021.
Ezinụlọ ya kwadoro na akụkọ 8 Ugbu a na ọ 'nwụrụ n'ihi nsogbu site na ọrụ'. Ezinụlọ Smith kelekwara onye ọ bụla maka igosipụta nkasi obi na ntanetị na-esote Ọchịchị ahụ! Akaụntụ Twitter nke nne ya tweeted dị ka ọ tweeted, 'Ezinụlọ Jeopardy nwere obi mgbawa n'ihi ọnwụ ọjọọ nke Brayden Smith. Ọ bụ enyi na enyi, na-akpa ọchị na-egbuke egbuke. 'Na obituiti maka nwatakịrị ize ndụ! Onye ochichi, a kọwawo ya dị ka 'onye na-agụ akwụkwọ na onye na-akụzi onwe ya, onye hụrụ ihe ọmụma n'anya na onye na-akwado ikpe ziri ezi'.
Ọ gụsịrị akwụkwọ na Mahadum Nevada na Las Vegas otu afọ tupu egwuregwu ya apụta. N'ịsọpụrụ ihe nketa ya na akpịrị ịkpọ nkụ, ezinụlọ ya hiwere Brayden Smith Memorial Fund, bụ ndị na-agbakọ ego maka ụmụ akwụkwọ na Nevada. Dika ulo oru ego a si kwuo, “Nkesa a gunyere ego maka ego enyem aka, ugwo nzuko, ugwo ulo akwukwo, ulo akwukwo, ihe ndi ozo, na ihe ndi ozo.” Fellowmụnna Anyị! Onye mmeri bụ James Holzhauer wutere ọnwụ Smith ma nyefee ka iwepụ onyinye mbụ na ego ahụ.
Aga m ebuli $ 10,000 mbụ. 'Tupu ọnwụ ya dị egwu, Smith mezuru nrọ ya ogologo ndụ nke ịsọ mpi na Jeopardy! Ihe omuma ya kwuru na o gosipụtara ikike ya maka ihe ọmụma mgbe ọ dị afọ iri na ụma mgbe ọ sonyeere otu ụlọ akwụkwọ sekọndrị Quiz Bowl. 'Schụso ihe ọmụma nke Smith masịrị onye ọbịa ya bụ Alex Trebek, onye kpọrọ ya 'Billy Buzzsaw' maka ikike ọ na-emeri mgbe niile, USA kọrọ Taa.
Trebek kwuru banyere Smith na ihe ndekọ edekọ edere edepụtara na Disemba 2020: 'Ọ kpọghị ndị mkpọrọ ọ bụla. Ọ dị njikere imeri. Ndị Smith nwekwara mmasị na Smith ma kelee ya maka ime Trebek obi ụtọ n'oge ụbọchị ikpeazụ ya dị ka onye ọbịa nke ihe nkiri a na-eche na Brayden bụ onyinye ikpeazụ Alex Trebek nyere.
Ọ hụrụ onye mmeri ukwu n'anya. 'Onye ozo dere na ha' nwere obi uto na Alex Trebek nwere onye choro dika Brayden na ihe ngosi ohuru ya 'n'ihi na obu' onye nzuzu dika ihe otiti '' ma 'ogwe osisi dika onye obula. 'Ha gbakwunyere na Smith meriri Daily Doubles n'ihi talent ya kama ọ ga-enwe obi ụtọ.
Dabere na TVLine, Smith bụ onye ama ama na ndị na-ege ntị nke mere ka akpọọ ya 'Onye Ikpeazụ Ikpeazụ Alex' na soshal midia. Teja Chemudupati, onye chere Smith ihu, gwara The Orange County Register na ọ sara ya na mmeri kwuru na Jenụwarị 2020: 'Mụ na ya nwere mkparịta ụka ngwa ngwa na m chọrọ ka ọ gaa ebe o nwere ike. Alex ji ndị mmeri kpọrọ ihe nke nwere ike ịgba ọsọ.
Ọ gaara enwe mmasị ịhụ onye dịka Brayden na-eme nke ọma. Ọ bụrụ na m mere I tufuru onye ọzọ, ọ nwere ike bụrụ na ọ bụ nwoke a kpọrọ Alex 'Billy Buzzsaw.' 'N'agbanyeghị ọnọdụ obi mgbawa gbara gburugburu ọnwụ Smith, o doro anya na ọ na-enwe mmetụta na-adịgide adịgide n'ihe ize ndụ! Ndị na-ekiri na ndị rụrụ ọrụ ngosi ahụ.
Kedu onye ka mma Smith ma ọ bụ Kohli?
Ọ bụghịkwa ihe ijuanya, ọ na-akwụ ụgwọ ọtụtụmmakarịaSmithdị ka onyeisi. N'ime Ule 55Kohliabụrụla onye isi nke India, ọ merie 33 ma tufuo 12. EbeSmith, nke gbara Ule 34 dika onye egwu, emeriela 18 ma tufuo 10.Kohlinwere nnukwu nnukwu mmeri-ọnwụ ruru 2.75 kaNke Smith1.8.Ọgọst 10 2020
Ekwesịrị m ịjụ gị ajụjụ ole na ole ma ị ga - eme ka m laghachi ngwa ngwa n'ihi na mgbe anyị gara ịmara ụdị chi ha ga - enwe, ha adịghị mma ọ bụ ezigbo onye otu gị mhaela naanị nke a bụ naanị nke a Ọ dị mfe otu onye bụ onye ọkpụkpọ kacha mma n'ụwa n'oge phatso ebe m kpọrọ ya ezigbo mma ọ dị n'ebe ahụ ị ga-aga nfe ị naghị eche maka ya na ị nọ ebe ahụ onye bụ skittles kacha mma n'oge ahụ a thats a tricky m na-eche ma ọ bụrụ na mgbe ọ na-atụ ogho ị ga-enwe mmasị n'oge ahụ m na-eche ihe ọ rụzuru n'oge gara aga afọ ole na ole bụ ihe ijuanya na otú ya bọl adịghị mfe n'ihi na Ọtọdọks anya-spinner n'ezie banye The egwuregwu na-abịa site n'oge a ụbọchị nte mgbe ị na-adabere mgbe niile na mgbanwe na ị maara X ihe ndị a weirdo na gị Bowling n'ihi ya, ọ bụ ihe ịtụnanya. Echere m na ọ ga-abụrịrị ihe kwesịrị ịrịba ama na ọ bụ weirdo kachasị mma nke kachasị mma na okwu Bekee, nwoke dị ka Jimmy Anderson na ihe ịtụnanya, ọ bụ ihe pụrụ iche mana echere m na ị ga-anọnyere ndị ị makwaara, ndị nwere ike gbaa n'okpuru ọnọdụ niile, so guys like Mitch Stock and as fastball now may even just breat, Bro, ma ọ bụrụ na i nwere ike na-gị mma, ị maara na e nwere bowlers nwere firepower na mgbanwe, ka batsman na onye ọ bụla Area otú ọ bụ n'ezie ihe na-enye gị a azịza ọsọsọ Okay'snye kachasị mma ị hụtụrụla Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ onye na-ahụ maka ihe na-eme ka ọ bụrụ na m ka nọ ebe a, ee, ị ga-ama jijiji wee chee m ihu. N'ezie, enwere m okomoko nke na-agaghị apụta n'oge ma ọ bụ nwee isi na egwuregwu mba ụwa.
Enwere m mmasị ịsị na Murray bụ ihe kachasị mma m hụtụrụla na ndụ m na maka m oge kachasị mma m gụrụ egwuregwu ahụ, mana megide ya bụ amụ amụ kọleji, Facebook nwere ịdọ aka na ntị na iyi Akhil megidere m ama ravichandran ashwin ok na kediegwu spinner graham swornụrụ iyi na ọ bụ ọfụma ya mere m nwere ụfọdụ? e mana ee Warren ọ na-asachapụ nnọọ iche na ị nwere arụsị enwere onye ndu na cricket n'ihi na ị na-egwu egwuregwu site na nwata ma họrọ ya n'ikpeazụ onye ị chere na nke ahụ bụ onye ndu m ọ bụ ya mere m ji akpọ cricket mana enwere atọ onye nyere m mmụọ ka m tie m, otu onye bụ n'ezie si go nwoke Richards na mgbe Brian Laracame na m bụ mgbe ha. Know mara ihe niile ndị America na-ekwu banyere ya, echere m na ha nwere mmetụta dị oke aka n'ihi na ọ gbanwere njide m na ụzọ nke abụọ mere ka isi m dịrị, anya m ka na-elekwa bọl anya na nke ahụ mere nnukwu ihe dị iche maka ụdị m. nke igwu egwu ma ndi ato a na ebe a bu ebe m bu dike m yeah Sanga daalụ nke ukwuu maka ịgwa m okwu Aga m ahapụ gị ajụjụ m chere na ọtụtụ ga-eche na ha maara na ị nwere ike ịma iwu nna ukwu Nwoke a bụ onye nwere oke ụbụrụ , ị ga-abanye na ndọrọ ndọrọ ọchịchị ọ dịghị mma daalụ nke ukwuu, enwere m ekele maka ya dị iche iche mere ka ọ bụrụ ihe obi ụtọ na m ga-ahụ gị n'oge na-adịghị anya ma lekọta gị anya ma nwee ahụ ike
Smith ọ nwere ike ịbụ onye isi ọzọ?
Smithamachibidoro ya ịbụ onye isi ọrụ afọ abụọ mgbe ọgbaghara bọọlụ mebiri na South Africa.Smithamachibidoro ya ruo afọ abụọ ọ bụla na-edu ndú na Australian egwuregwu na ya mere o tozuru oke otu ogeọzọduru ndị otu mba na May 2020.Ọnwa Ise 2, 2021
Kedu ihe kpatara Smith abụghị onye isi nke Australia?
SteveSmith, onye nwere ihe ịga nke ọma dị kaỌchịagha Australian'agbata afọ 2014 na 2018, ewepụrụ onye isi ọrụ mgbe ihe ọjọọ gbasara ịgba bọọlụ. Ọ bụ ezie na enyere ya iwu otu afọ maka nsonye ya na asịrị wetara aha ọjọọOnye Australiante, e nyere ya mmachi afọ abụọ nke ịbụ onye isi.Mar 30 2021
Ọnye na-bụ Australia ODI captain?
Na 8 May 2018, Tim Paine ka akpọkwara dị kaODI onye isina Aaron Finch weghachiri dị ka T20Ionyeisiawa ole na ole gasịrị, ọ bụ ezie na Finch dochiri Paine dị kaODI onye isimgbe 5-0 gasịrịODIusoro ncha ọcha na England na June 2018.
Gini mere eji egwu egwu ji egwu bọọlụ?
Na egwuregwu nkente,igba bọọlụ bụihe nke onye na-arụ ọrụ iwu na-akwadoghị gbanwee ọnọdụ nkebọọlụ. Ebumnuche bụ isi nkeigba bọọlụ bụigbochi aerodynamics nkebọọlụiji nyere swing Bowling.
Ndi Steve Smith bu onye isi Australia?
Smithbụọchịagha Australiana usoro atọ ahụ mgbe ule Durban dakọtara naỌstrelialaghachi na 2018 ama jijijiOnye Australiante.Smith, Ntinye aka Warner na Bancroft na ihe omume bọọlụ mere ka ha ghara ịkwa iko maka otu afọ (ọnwa 9 n'ihe banyere Bancroft).Ọnwa Ise 30, 2021
Onye kachasị mma nke India?
Weere dị kaọchịagha kacha mma nke India, Ndi otu ndi agha nke MS Dhoni duziri na egwuregwu 200Indiamerie 110. Suresh Raina onye isi izizi biara na njem 2010 nke Zimbabwe. A họpụtara southpaw dị ka onye nkwọ maka naanị usoro abụọ n'etiti 2010-14. N'okpuru onyeisi ya,Indiarite uru isii ma merie nsogbu ise.06.12.2021
Olee otú Steve Smith nwụrụ n'ihe ọghọm ọgba tum tum?
The Weekender: Mountain biker Steve Smith nwụrụ n'ihe mberede ọgba tum tum. Onye na-agba ịnyịnya ịnyịnya ígwè Steve Smith dị afọ 26 nwụrụ mgbe ọ tara ahụhụ dị ukwuu n'ihe ọghọm ọgba tum tum na Nanaimo, British Columbia.
Afọ ole ka Stevie Smith dị mgbe ọ nwụrụ?
Stevie Smith nwụrụ n'ihe ọghọm ọgba tum tum. Onye Canada Stevie Smith, otu n’ime ezigbo kpakpando nke World Cup Downhill racing, nwụrụ ụnyaahụ n’ihi mmerụ ahụ ụbụrụ merụrụ ya n’ihe ọghọm ọgba tum tum. Ọ dị afọ iri abụọ na isii.
Kedu ka Steve Smith si Nanaimo BC si nwụọ?
Smith, onye dị afọ 26 ma si na Cassidy, B.C., nwụọ n'ehihie Tuesday n'ihi oke mmerụ ahụ ụbụrụ merụrụ na ngwụsị izu gara aga na ọgba tum tum na nso ụlọ ya na Nanaimo, B.C. Onye ọgba tum tum na-asọ mpi na UCI Mountain Bike World Cup circuit na ọ bụ onye otu Devinci Global Racing.